सिटौला र गगनले देउवालाई किन सहयोग गरे ? यसरी खुल्दैछ गोप्य राज - Enepalese.com
सिटौला र गगनले देउवालाई किन सहयोग गरे ? यसरी खुल्दैछ गोप्य राज
इनेप्लिज २०७२ फागुन २८ गते ११:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाली कांग्रेसकाको १३औँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा ठूलो चोट सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेललाई परेको छ । पौडेलले आफ्नो पराजयका विषयमा सार्वजनिक रुपमा केही बताएका छैनन् । तर उनको मौनव्रतलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो पराजयपछि सहानुभूति दिन आउने नेता तथा कार्यकर्तासँग आफ्नो हारका विषयमा धेरै खुलेर बोल्दैनन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘मलाई ठाूलो षड्यन्त्र गरेर हराइयो । हराउनेहरूको इतिहासले मूल्यांकन गर्ने । क–कसको हात छ, त्यो सबैले समय आउँदा छर्लङ्ग देख्ने छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको शिकार भएँ ।’ संस्थापन समूहबाट उदाएका कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापाप्रति लक्षित हुने गरेका पौडेलको मनसाय यूक्त भनाइ पनि त्यति अविश्वासिला छ्रैनन् । सिटौला र गगनले संस्थापनलाई सहयोग गरेको भए सायद पौडेलले जित्ने थिए । कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय नेताले भने, ‘सिटौला र गगन जी नउठेर सहयोग गरेको भए संस्थापनले जित्ने थियो । महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यलाई आएको मतको परिणामले पनि त्यो देखाउँछ ।’ पहिलो चरणमा नकआउट भएका सिटौलाले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्ने भनेर दुई पटक कुटनीतिक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरे । यो विज्ञप्तिले पनि पौडेलको पराजय र देउवाको जितलाई अझै मजबदुत बनाइ दिएको थियो । हुन त सिटौला र गगनलाई दक्षिणी छिमेकीले उचालेर उम्मेदवार बनाएको आरोप स्वयं कांग्रेसी नेताहरूको छ । यो आरोपलाई सिटौला र गगनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । देउवाले विजयी हुन सिटौलाको झिनो मत पनि तान्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनले सिटौला र गगनसँग भेट गरेर विभिन्न प्रस्ताव राखेका थिए । सिटौलाको संसदस्य दलको नेता बन्ने आकंक्षालाई भने देउवाले ठाडै अस्विकार गरिदिएका थिए । त्यसपछि सिटौलाले बाध्य भएर संस्थापन समूहलाई सहयोग गर्नुभन्दा देउवालाई सहयोग गरेर गुन लगाएको कांग्रेसी नेताहरूको आरोप छ । सुरुमा सिटौलालाई देउवाले उपसभापति, सहमहामन्त्री र आठ केन्द्रीय सदस्यको अफर दिएका थिए । तर त्यसमा पनि नमानेर सिटौलाले संसदीय दलको नेता ताकेपछि कुरा यत्तिकै टुङ्गिएको थियो । देउवाले नपुच्छने र सभापतिमा जित सुनिश्चित भएको देखेपछि सिटौलाले बाध्य भएर साना प्रस्ताव राख्दै समर्थन गरेको स्रोतले जनाएको छ । अन्त्यमा सिटौलालाई संसदीय बोर्डको सदस्य बनाउने, केन्द्रीय सदस्य मनोनय तथा गगनलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरी कांग्रेसको प्रवक्ता दिने विषयमा सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । गगन अब प्रवक्ता नियुक्तिको पर्खाइमा छन् । गगनले जति राम्रो प्रवक्ताको जिम्मेवारी कांग्रेसमा अरुले सायद निभाउन नसक्लान पनि । अर्जुन नरसिंह केसी महामन्त्रीमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि देउवासँग उनको केही चिसोपना बढेको छ । देउवाले आफ्नो पक्षमा मत नमागिदिएको केसीले आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तासँग गुनासो गर्ने गरेका छन् । महामन्त्रीमा पराजित भएपनि केसीलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने आवश्वासन दिएको देउवा पक्षीय एक नेताले बताए ।